Ny fametrahana an-tsoratra ho an'ny Stainless vy multistage centrifugal paompy
Ny fametrahana Notes for Stainless Steel Multistage Centrifugal Pump: 1. Avy amin'ny Stainless vy multistage centrifugal paompy fametrahana ny teknolojia, ny sodina suction mitaky henjana toe tombo-kase, tsy afaka ny hanana na sodina mandefa leakage, Raha tsy izany dia hanimba ny banga amin'ny ambaratonga ny rano izay ...
ny mpitantana ny 18-06-28
Matetika, ny Centrifugal Pump Test Ampidiro Type Test Test sy Factory: ny paompy centrifugal fitsapana ─ fitiliana karazana fitsapana Type dia ahitana: mandeha fitsapana, fampisehoana fitsapana sy ny fitsapana ary ny tabataba captivation hovitrovitra fitsapana, sns A: Ny nihazakazaka fitsapana Rehefa mandeha fitsapana, dia tokony hanamarina ny mari-pana fiakaran'ny ny paompy ...
Centrifugal paompy ny fikarakarana Mizara ho ambaratonga voalohany sy faharoa, sy ny votoaty manokana ho tafiditra?
Centrifugal paompy ny fikarakarana Mizara ho ambaratonga voalohany sy faharoa, sy ny votoaty manokana ho tafiditra? Centrifugal paompy ambaratonga 1 fikojakojana anatiny toy izao manaraka izao: 1) jereo mba hahazoana antoka fa fonosana tsy fohy, fihary manavakavaka, no anaovan'ireo sy leakage dia Super vozon'akanjoko; 2) hahitana raha misy ...
Fampitandremana! Paompy manana toe-javatra manaraka ireto dia tokony hitsahatra avy hatrany!
"Raha mahita misy ireto zavatra manaraka ireto dia tokony hijanona paompy" (1) Ny paompy manana rano leakage; (2) Raha ny maotera ny paompy smokes na mahazo afo; (3) Pump manana feo ara-dalàna; (4) Rehefa miakatra ny mari-pana mitondra-up mafy loatra, na smokes; (5) Raha manana ny paompy hovitrovitra mafy be;